Tsikerain’ny mpitondra fivavahana amin’ny fomba fitafiny ny ekipa volleyball vehivavy ao amin’ny Olaimpikan’i Tokyo · Global Voices teny Malagasy
Misy ny midera ary misy ny mitsikera tsy maotona
Voadika ny 28 Aogositra 2021 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, Español, English
Nopihana avy amin'ny horonantsary iray mandefa mivantana ny lalao volleyball nifanandrinan'i Torkia sy i Shina. Olaimpika Tokyo, 25 jolay 2021.
Nandresy an'i Shina tamin'ny set 3–0 ny ekipan'i Torkia vehivavy amin'ny volleyball, malaza ho “Soltànan'ny Harato,” nandritra ny lalao olaimpika tao Tokyo tamin'ny 25 jolay. Fandresena mendrika ankalazaina izany — efa nahazo medaly olaimpika enina i Shina teo aloha tamin'ny taranja volleyball vehivavy ka tafiditra amin'izany ny volamena telo. Saingy raha maro ireo nidera ny ekipa tiorka izay hifandona amin'i Italia ny lalaony manaraka, ny hafa kosa nisedra fibedesana noho ny fitsikerana ireo mpilalao noho ny tsy fisian-ny lazain-dry zareo ho fahamaotinana eo amin'ny mpilalao.
Nalaza haingana tamin'ny aterineto i İhsan Şenocak, mpanorina ny Foibem-Pikarohana Siantifika sy Ara-paharanitan-tsaina (IFAM), fikambanam-pivavahana iray ao Torkia, rehefa nitsikera ny (tsy) fanetre-tenan'ny mpilalao. Niteraka fitabatabana anjotra sy vao maika nanampy trotraka adihevitra amin'ny zon'ny vehivavy sy ny lahika(isma) ao Torkia ny siokany mitsikera ny ekipa sy miady hevitra amin'ny anjara toeran'ny vehivavy ao amin'ny Islam.
Ry zanakavavin'Islam! Tsy soltànan'ny toeram-pilalaovana ianareo. Soltànan'ny finoana, fahadiovam-panahy, fahendrem-pisainana, fanetre-tena ary fahamaotinana ianareo. Zanakavavin'ny menatra mampiseho orona ianareo. Aza manaiky hofitahina sy lasa hazan'ny efijery sy ny kolontsaina malazan'ny mpirahalahy bevolombava miantso anareo ho Soltàna. Ianareo no fanantenanay sy vavaka ataonay.
Nirarakompana ny valiny avy amin'ireo mpisera Twitter Tiorka.
Mihevitra ry zareo fa miresaka fijery tsy mitovy ny tsy fahalalana misokatra sy ny fitongilangilanam-pijery. Saingy tsy izany
İki resim arasındaki medeniyet farkını buraya bırakıyorum 🙂 #FileninSultanları ❤ pic.twitter.com/pCWeJdfx1M
Avelako eto ny fahasamihafan-kolontsaina eo amin'ny sary roa.
Ny ekipantsika volleyball vehivavy! Ary maninona raha ianao Ihsan Senocak no manontany ny tenanao momba ny zanakavavin'ny Islam. Andao jerena hoe dunks firy no ho azon'ny lohanao? Ary mba mihevitra anao ho iza moa ianao ity? Fanontaniana hafa iray manontolo izany an.
Ny setrin'ny sioka nataon'i Şenocak no nahatonga ilay mpisera hizara sioka iray hafa izay nilazànu “tsy misy zava-manohintohina” tamin'ny sioka nataony teo aloha ary “antso tsotra fotsiny amin'izay tokony atao sy tsy ataon'ny vehivavy ao amin'ny Islam iny.”
Tamin'ny taona 2019 i Şenocak nanao toriteny izay izy ihany no nitatitra izay nolazainy, “zanakavavy, vady, manao pataloha, mandeha any amin'ny oniversite, ary manao ny volomasony, hiafara any amin'ny afobe ireny.”
Tsy vao sambany ny Soltàny no ambany fanarahamason'ireo mpandala ny nentindrazana izay lehilahy ny ankamaroany. Tamin'ny Janoary 2020, nesorina tao amin'ny antoko ny mpikambana iray ao amin'ny Antokom-Bahoaka Nasionaly (MHP) Birol Şahin, rehefa niampanga ny ekipa ho tsy maotona. Taorian'ny fandreseny an'i Alemaina nahafahan'ny ekipa handray anjara amin'ny Lalao Olaimpikan'i Tokyo, nilaza i Şahin, “Amin'ny fihaikanareo ny didin'Andriamanitra handrakotra ny vatanareo, mitafy tsy maotona ianareo, maneho vatana ianareo ary faly amin'izany satria ho any Tokyo ianareo.”
Misy fifanenjanana hatrany eo amin'ireo mpandala ny nentin-drazana sy ireo lahika ao Torkia. Tamin'ny taona 2014, nampangain'ny Filoha Erdogan ho tsy mahalala na inona na inona amin'ny maha-reny ny feminista. Raha niteny tamin'ny vovonana iray tao Istanbul, voalaza fa niteny izao ny filoha, “Misy olona mahatakatra izany raha tsy afa-manakatra izany ny hafa. Tsy ho hainao ny manazava izany amin'n feminista satria tsy manaiky ny tsirinkevitry ny maha-reny ry zareo.”
Tamin'ny jona 2021, niala tamin'ny Dinan'i Istambul — fampianarana iray miaro ny vehivavy amin'ny fihoaram-pefy an-tokantrano sy ny fanohintohinana ara-pananahana — ny governemanta teo ambany fitantanan'ny Antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana. Tao amin'ny lahatsoratra iray ho an'ny Al-Monitor, nampangain'ny mpanao gazety Pinar Tremblay ireo mpandala nentin-drazana milaza ho miaro ny maha-vehivavy, sady mamadika ny vehivavy ho amboara (fandrombaka na mahalaza azy hafa ny hoe entambarotra).
Nahatonga ny vatan'ny vehivavy ho marefo ny ideôlôjia islamista fanjakan-dray ataon'ny fanjakana. Ao amin'ny lalan-tsainy, fananan'ny lehilahy ny vehivavy. Heverina ho fifanandrinana (iray) ny fifandirana politika tsirairay avy. Rehefa tapitra ilay fifanandrinana, dia afa-maka haza ny mpandresy, ka ao anatin'izany ny vehivavy sy ny zazavavy. Ohatra, taorian'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny 15 jolay, ranty avy amin'ny pro-AKP ao amin'ny tambajotra sosialy no manamafy fa “amboaranay ny vadin'ny mpanongam-panjakana.” Nandritra ny référendum taona 2017, mpiasa iray tao amin'ny monisipaliten'Istanbul no namoaka tao amin'ny tambajotra sosialy fa ady iny ka rehefa resy tamin'ny référendum ireo nanohitra ny rafitra mampanjaka ny filoha dia “ho azontsika ny zananivavy sy ny vadiny“.